Mootooyinka buugga la caddaymaha, sawiro, ratings, dib u eegista iyo discusssions | Mootooyinka buugga la caddaymaha, sawiro, ratings, dib u eegista iyo discusssions
Kawasaki Ninja 650R 2012 Price ee India – caddaymaha Bajaj Auto ayaa soo bandhigay oo dhan oo cusub 2012 edition ah superbike Kawasaki Ninja 650R toddobaadkii la soo dhaafay. Maxaa yeelay, boqorku macluumaad aad Bajaj ayaa ilaa hadda iibin 3,000 unugyada qoyska Ninja ah, taas oo marka hore la soo bandhigay ee sanadka soo of 2009. dambayn 2012 model socota olole caalami ah oo Ninja 650R soo bandhigay in June 2011. Sida aynu wada ognahay, Kawasaki waa hogaamiyaha ee qeybta baaskiil isboortiga illa inta u dhaxaysa Rs 2 si ay u 5 lakh la share suuqa of a 65 boqolkiiba. Tani waa sports premium baaskiil ku motor saddexaad soo bandhigay ee dalka ka dib markii Ninja Kawasaki ku 250R iyo KTM ah 200 Duke. Shaki kuma jiro in ay style iyo qaabeynta tegi doonaa wixii ka dambeeya waxaa kharashka. Kawasaki Ninja 650R 2012 caddaymaha Afar-stroke, dareere-qaboojiyey, DOHC, afar-waalka, engine mataanaha isku midka ah 649 cc barakaca 72 Sabuurka @ 8500 RPM xoog badnaan 66 Xuddunta nm @ 7000 RPM Xuddunta ugu badnaan duro shidaalka Digital la Labada ceejinta 38mm Keihin 83.0 mm dhululubo dhaleen iyo 60.0 mm Stoke 11.3:1 ratio riixo TCBI la rabo in horay elektarooniga ah 15.5 ltrs awoodda shidaalka Bilow is Daawaha giraangiraha la 1410 mm saldhig wheel Front -120 / 70-17 ZRI7M / C (58W), Rear-160 / 60 - 17 ZRI7M / C (69W) taayirrada 6 xawaaraha sanduuqa marsho Dual 300 mm qayb ubax tripe disc hore la jiray laba calipers qalab biriiga Hal 220 mm qayb ubax disc danbe la qalab hal jejebiyey caliper 41 mm telescopic fargeeto / 120 mm ganaax hore Tani waa baaskiil horyalka isagoo miisaanka waddada of a 460.8 lbs iyo 31.7 kursiga ...
2009 Honda CB1000R - Imtixaanka Road Fun Reebay: Honda ugu fiican ma waxaad ka iibsan kartaa! Jeesada in Honda dhismaha helicopter fiican u shaqeeya. credit Major for sidoo kale naga siiyo mooto / qalabka gaadiidka ah auto-trans-qalabaysan mooto-sida in ay tahay in la mid ka mid ah size-full laba-wheelers sahlan-to-door abid. laakiin, daacad ah, Honda, maxaad u haysta oo inagu soo? niinasaa salaamay CB1000R ku dul ay sal-dhigida ee Yurub sanadkii la soo dhaafay. Dhab ahaan, this baaskiil qaawan CBR1000RR ku salaysan dhameysatay kaalinta labaad ee 2008 ee International Bike ee doorashada Sanadka, oo aan in laga xoreeyo dalka ah. kuwaas oo u diiday, baaskiilka ma xitaa hesho in ay u codeeyaan, waayo,! Qaar ka mid ah xigasho oo caan ka ah culimmadii Yurub? "Tallaabo A Rafaa for Honda ee category qaawan,"Ayuu yiri Bike Scandinavia. "Sida iska cad Clasico tartameen ay engine hufan, joojiye wanaagsan iyo maaraynta af badan. " Tifaftirayaasha ee Belgium ee Motor Wereldwere siman amaan buuxda, xataa haddii ay ku bilaabatay si rights reserved: "In tiro, CB1000R ma aha sax ah nooca baaskiil in uu jiidayo inkiri ka haddiiba cagihiinna hoostooda. Tani waa mid ku habboon in labada engine iyo qalfoofka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa fuushan dhigaysa inaad ku gaadhaan danihiina waxa baaskiil jar isku dheeli tiran Honda ugu da'da yaraa qaawan run ahaantii waa; dheelitirka ah in kor ku darayaa in saxda ah, maaraysay fudud oo xiiso leh. Factor in torquey a, macaan-socda engine oo halkaas ku yahay, baaskiil thenaked ee sannadka. " Sidaas awgeed, waxaan go'aansaday in ay arkaan nafteena waxa loo buunbuuninayo oo dhan waxaa ka ku saabsan oo jaale diyaarad in Europe. Waxaan finagled baaskiil baxay Honda Austria iyo ...
lagu arkay: Moto Guzzi Norge The Moto Guzzi Norge ayaa ubucda ah oo aan wacyiga baaskiilada socdaalka markii qaar ka mid ah. Mid ka mid ah lagu daydo oo dheeraad ah duwanyihiin suuqa, waxa ay sidoo kale dhacdo in mid ka mid ah ugu fiican cows iyo ugu wax ku ool ah - sidoo kale haddii mid ka mid ah cuslaa ee. Iyada oo hab cusub sii daayay sanadkan ee la soo dhaafay, oo qayb ka ah dadaal hagar la'aan dhigay Moto Guzzi ee caadiga ah, Norge waa wax aan macquul aheyn in ay iska indha xitaa suuqa socdaalka dadku maanta. Sida badan shirkadaha mooto Talyaani, Moto Guzzi waa cajiib faani hidihiisa, iyo Norge uu leeyahay mid ka mid ah si gaar ah gaar ah. Waxaa la magacaabay ka dib markii Norge GT ah, groundbreaking shirkadda 1928 model - laftiisa magacaabay airship in uu ahaa kii ugu horeeyay ee u soo duuli ka badan Cidhifka Waqooyi. 500cc The GT Norge dhameystirtay kortaan imtixaanka 4,000-mile ka shirkadda ee HQ Talyaani in Lappland Norway ee, darfood oo gudaha ka xigto giraanta cirifka. Waa nooc ka mid ah masaafo aan kala saaro lahaa sida Dilal kala ah Tacaddi cross-qaaradda xataa maanta, iyo in 1928 waxaa la xitaa ka sii badan la siiyey gobolka ee waddooyinka. Shirkadda lahaa hal dhibic si ay u caddeeyaan: ay Mudanayaasha ganaax swingarm gadaal - ugu horeeyay ee noociisa ah - shaqeeyay, iyo awood laga yaabaa sodcaalladoodii masaafo weyn yahay ahaayeen haddii kale fududaan. Engineer Guiseppe Guzzi soo qulqulayaan in afar toddobaad. Marka Norge la looguma in 2005, waxaa soo baxay la fairing dabayl-tunnel-loogu talagalay iyo v-mataanaha engine a casriga ah iyo accoutrements, oo dhameystirtay in aad isku geeyo. War saxaafadeedka ayaa lagu of ujeedadu ahayd cad, In kastoo aan ahaa oo aan ...
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 Dib & # ...
2009 Kawasaki Vulcan Voyager 1700 | Review High-Tech Classic Ka dib markii fasax lix sanno ah ka maraynaa, Kawasaki waxaa reentering suuqa dharka buuxa socdaalka la teknoolajiyada weeraryahanka, nostalgically magacaabay, 2009 Voyager. Kawasaki waxaa andacoonayaan in ay Vulcan cusub 1700 taxane sida bellwether mustaqbalka shirkadda ee qeybta markab ah, iyo Voyager ku reimagined ayaa u wakiishay sida flagship luxe line ay safar ee. Iyada oo ay muddo dheer stroke 1700cc engine V-mataanaha iyo ferjiga '60s muruqa riffs Attam baabuur, ah 1700 Voyager ekaan ina adeerkiis iyo sahashan American ah Wabka afar XII Voyager in libdhay badan jid toosan ee 2003. labis cusub The Voyager ee Occidental waa jillaab muuqaal in Kawasaki ee istaraatijiyad si ay u horumariyaan mooto in ay rajaynayso in ay ka faa'ideysan doonaan bannaan oo ka tagay by tartan-kuwaas oo, a-teknoolojiyad sare ton V-mataanaha powered, markab dharka buuxa. dhabbihii hadda qeybta socdaalka ee koritaanka duudsiyeen cuf ee guud ahaan hoos u dhaca iibka warshadaha mooto ee, iyo Kawasaki arkaa dakhliga la tuuri karo iyaga rarka Thar. Shirkadda waxaa sharad in muruqa cusub mile-cuna dabaqa macradka ku xoojiyo doonto difaac ka dhan ah u dhac ah. Horumarinta ee Vulcan ah 1700 taxane (kaas oo sidoo kale ka mid ah Classic yaqaan, Classic Lt iyo Nomad) waxay ahayd dadaal top-down, marka hore diiradda Voyager ah. The Voyager ee jirka eegno / isuga casriga cusub sida xaqiiqada ah guulaysto at waddada. tegey oo (in afar meelood ugu) unlamented waa xaglo fiiqan, engine qarinaayay, -geesood ...
Honda rc166 lix dhululubo baaskiil ka 1960...
Honda rc166 lix dhululubo baaskiil ka 1960 Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan RC166 Honda ah 250/6. Grand Prix tartanka maray kacaan ee 1960 hore. Honda ayaa lix dhululubo si deg deg ah isugu yimid. Si aad u hubiso soo baxay sanqadhii Honda RC166 Lix dhululubada ah booqo link hoos ku kumbyuutarradeedu lagu daray. Taasi waa mid ka mid baaskiil sanqadha macaan. Waxaan maqlay mid on sano Dhexe-Ohio ka hor. Waxaa soo diray. Sida of NR si Le Mans daray baaskiilada Production. Honda fuulnay lix-dhululubo DOHC ku powerplant dhab ah ay. Honda iyada oo 1960 la soo orday. a 50 cc xaafuun, a 125 cc lix dhululubo oo lagu daray V8 ah. ay haatan qaar ka mid ah waxay leeyihiin 5 fardo badan Honda lixdii. RC166 ee 1967 waa baaskiil la mid ah sida. Honda RC166 lix dhululubo baaskiil sidii mid ah Pt2 1960: Honda RC166 Information: Honda RC166 Wallpapers. Telegraph oo ku saabsan Honda RC166. naaneesta: comment: Sida of 1960, Honda galay. mashiinada tartanka Japanese ahaayeen deeqsi ah lix dhululubo. Farqiga weyn ee u dhexeeya faahfaahinta wadada lagu daray tartanka baaskiil ahaa. Waayo, shuqulladiisa oo stadian baaskiilada. Honda wuxuu bilaabay inuu mootooyinka-soo-saarka ay ka Superbike. 4 filtarka for dhululubo kasta: RC143: 1960: Twin: 44 × 41 mm: 124.68 cc (8. Waxay ahayd mooto wax soo saarka ugu horeysay Honda ayaa leh lix. mooto ugu horeysay in Honda dhisay lix dhululubo ahaa baaskiil tartanka 250cc RC166 in lagu isticmaalay. Honda tartanka – qayb 1. Honda tartanka 1960 ;. Honda 250cc RC166. a lix dhululubo cusub u muuqataa. Waxa ay u muuqataa baaskiil tani waa cad ka weyn yahay RC166 ah. Honda RC166 ringtone. Markan waa Mike Hailwood ...
Baaskiilado dhabayseen Taariikhda A kooban Marque ah: dhabayseen Walaalaha Collier dhisay ay mashiinka ugu horeysay ee 1899, iyo by 1907 ayaa ku guuleystay ee Isle of Man TT jinsiyadaha. Ka dib markii meel labaad ee 1908, waxay mar kale ku guuleystay in 1909 iyo 1910. Ka dib markii wax soo saarka WWI dib u bilaabay isticmaalaya matoorada labada JAP iyo Maag . Fri May 24 2013 duhoda76wanadoo.fr jmpot Rally France video video France april 2013 Maalin wacan, Magacaygu waa JT Davis, Waxaan ahay soosaare ah Associate ee Firimbiga Media oo aan ku yaalaan ka Maraykanka Capitol shan mayl. Waxaan soo saareynaa taxane ah oo cusub oo loogu talagalay Discovery Channel oo ku saabsan makaanik kuwaas oo dayactir iyo dib u soo celisa mootooyinka guridda. Waxaan ciyaari lix (6) baaskiilada badan taxane ah saddex qayb ka mid ah, dhacdo kasta oo aan u qorsheeyaan si ay u wadaagaan tafaasiil xiiso leh oo ku saabsan mootooyinka ah taas oo u baahan qaarkood jeegga xaqiiqda. Waxaan samaynayaa cilmi si loo ogaado qiimaha mooto xaalad soo celiyey sanayd. mootada ee qaybtii hore waa a 1931 X Model dhabayseen leh Brough Sare Sidecar. Waxaan ku lifaaqan hor iyo ka dib photos of the baaskiil iyo dib u soo celinta. aad i gelin karaa in aad taabato qof leh qiimayn karaa pre baaskiil / dib u soo celinta post? Waxaan fahamsanahay in ay adkaan doonto in la siiyo qiimaha dhabta ah oo aan og faahfaahinta sida baaskiil la soo celiyay, waxa alaabta la isticmaalay iyo daryeelka qaaday si loo soo celiyo nolosha. Si kastaba ha ahaatee, tiradaasi iyadoo dalabkaas la qiimeyn muuqaal ah oo ka caawin karta in bixinta macluumaad sax ah u siladda Discovery Channel. ...
Moto Morini Kanguro iyo Dart – Classi ...
Moto Morini Kanguro iyo Dart Dadka intooda badan u muuqdaan in laysugu mid ka mid ah lagu daydo Morini Sport ama Strada si fiican u yaqaan. Laakiin at darafyadiisa ka soo horjeeda ee heerka aad ka heli doontaa Dart ah super-sac oo qurxoonayd oo ku rufty-tufty Kanguro. Haddaba sidee sameeyey Ken Philp timaado in labada leedahay? marka hore waxaan arkay Kanguro a at Maxkamadda Earls in 1982, oo la dhacay sida ay ahayd off-road V-mataanaha. Waxaan u lahaa dhibaato caafimaad ee 1984, si helay takhaluso dhawr baaskiilada iyo this mid iibsaday, Kanguro ugu horreeyey oo NLM lahaa dukaanka. Waxa kaliya sii mar kasta oo aan u doonayay in ay! Waxa uu i siiyay BADAN a raaxaysi off-road, in kasta oo ay miisaan, oo waxaan ahay shortie a – 5'5. Waxa kaliya ee aan helay laga takhaluso waxaa ka mid ah in 2003 maxaa yeelay, waxaan keliya oo 15% awoodda sambabka hadda. Ma dhihi karo waxaa jiray wax kasta oo anigu ma aan jeclaan ku saabsan. Waxaan u isticmaalaa enduros, raad-saaran, Weston Beach Race, tijaabooyin long-distance, iyo wixii la mid ah, oo mar daboolay 720 miles in 20 saacadood on dhacdo MCC ah. Guud ahaan waan daboolay oo ku saabsan 16,000 miles. Ma jirin wax dhibaato ah oo dhab ah, oo kaliya kuwa la jiray qaladkeyga! Qof kasta iibsato Kanguro ah waa in si cad ah ee X-daydo. The X1 iyo X2 leeyihiin loox embriyaha, iyo dildilaaca X yiilleen meesha ugu footrest xaq u. X1 wuxuu leeyahay xoojinta waxaa. laambad waa kaliya AC iftiin toos ah, si wax soo saarka kala duwan yihiin xawaare engine. Sidoo kale nidaamka nalalka 6-volt a, la batari aad u yar! Sidaas, isagoo leedahay Kanguro ka cusub, run ahaantii aad ayaan ugu dhicin motor ka. Oo haddana waxaan arkay sawirka Dart cusub ee saxaafadda, oo aan ahaa ...
Just weblog kale WordPress.com 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie ayaa sheegay in: Waxaan helay Ridgeback uu ku noqon karo xiiso leh, guuxa iyo dhabarta Jidhidhico - ka dibna mar kale, in kaliya laga yaabaa in aan cajaladood spinal wada jabiyo (in hab wanaagsan) - han adag aan loogu tala galay in ay raaxo leh iyo noocyada rookaha adag-assed jecel yihiin in ay muujiyaan dulqaad xanuun ay ku yeeshay oo si xoogan kinda jidka chromed. Haa, Waan ogahay in Motorcycle.Com ma aha run ahaantii meeshii rookaha u yimid inuu akhriyo oo ku saabsan fardo dambeeyay birta, laakiinse iyagu haddii aan u caawin doonaa karaa. Mootooyinka waa mootooyinka iyo haddii aad u jeclaan karaa Concours ah, halka ay ku qosleen waqti isku mid ah, aad u badan tahay in ay fahmaan halka kuwa naga mid ah ee dunida helicopter ah ka imanayaan. sidaas oo kale, haa, tani waa mooto oo waa bahal! Qod kuwa gaab spandex saaran jilicsan iyo koobabka difaaca gabdhaha wiilasha, mootooyinka this isku dayi doonaa in aad jebiso. Haddii aad ku noolaan la gelinno oo dhan dhawrsan, aad doonaa laga yaabaa in ay guriga yimaadaan leh tiro yar oo dheeraad ah taleefan u badan aad ka tagtay iyo aad doonaa sida xaqiiqada ah waxay leeyihiin Sheeko weyn u sheegin carruurta ... Waayahay, laga yaabaa in aan carruurta, laakiin saaxiibada aad u jeclaan doonaa si 'maqli em. Marka laga reebo mid ku saabsan waqtiga aad markii ay ku xayiran on in taangiga reserve yar ee Ridgeback ayaa mahad Boulevard iyo tirada kaliya aad heshay jiray inuu guri ka mid ah dude ee kooxda Brothers ah; ka dibna mid ka mid ma doonayo in uu maqlo sheekooyinka aad. Sorry, qabaa waxa ku saabsan. Diidanaa-in la wheelbase ku dhow 9 cagaha iyo barakac ah 1750cc, Dog Big ku Ridgeback waa Turner madaxa a ...
KTM 450 Rally replica Available in ay amarto & # ...
KTM 450 Rally replica Available in ay amarto KTM The 450 Rally dooriga ugu dhaqsaha badan la heli karaa si ay dadweynaha doonaa, laakiin ma cadda haddii ay Maraykanka imanaya. KTM dhaliyay ay 13aad oo isku xiga Dakar Rally badiso 2014, iyadoo Marc kooma ku dhameysteen uu tartan ugu dhow dhow laba saacadood ka hor. Hubka reer Spain waxa uu ahaa version cusub ee KTM ee 450 Rally baaskiil, version ah oo brand Orange ayaa ku dhawaaqay dhawaan la heli karo si ay dadweynaha doonaa. KTM The 450 Rally-dooriga u qoreysa jir ah dib uqaabaynta iyo ergonomics updated, ganaax gadaal cusub iyo tartan-xaqiijiyay, engine 450cc shidaal-duri. Waayo, waajib dibad-dooriga wuxuu la iman doonaa shidaal-Bamka oo kala duwan ah taangiyada hore iyo gadaal iyo sidoo in la kordhiyo kala duwan. Qiimaha socday, sida ka muuqata war-saxaafadeed ee hoos ku, waa EUR 24,000, kaas oo sida la qoray of this article diinta agagaarka $32,988. Waa cadda in replica Rally u diyaar u noqon doono in suuqa Maraykanka. – MotoUSA Byron Wilson model cusub ee KTM ah 450 Mashiinka Rally in naaftaadu warshad sameeyay ciyaartoodii ugu horeysay ee October ee dibad-Morocco sida imtixaan hore iyo finalka ee tartanka xaaladaha. Mashiinka markaas ahaa ku xiran qaadashada imtixaanka kama dambaysta ah ee Dakar ee, oo baaskiil ku tegey inuu flawlessly shaqeeyaan oo dhan tartanka 9,000km la Marc kooma on-guddiga in ay qaataan guushii 13aad oo isku xiga KTM ee. Sida model hore ee mashiinka dibad-bax la dhisay, waayo xilligii 690cc, Mashiinka this cusub ayaa loogu talagalay in ka dhulka iyo ilaa la haboon Dakar maanta ...
2013 MV Agusta F3 First Ride In wejiga ah u dhacooda iibka sportbike caalamka, Olimpico brand mooto Talyaani MV Agusta ayaa ujeedkiisu yahay inuu dib u soo nooleeyo suuqa SuperSport dhexe ee fadhiya ay F3 dhawaan sii daayay. Powered by aalladda is haysta engine ah xaafuun-dhululubo 675cc, F3 ah ($13,999) waxaa European mid kale ha qaato on habka ugu fiican ee ka yimaadaan Cardiff si Cardiff. ARAGTIDA NOQONAYAA Xaqiiqada Wuxuu ku dhashay afar sano ka hor, F3 waa riyo madaxweynaha dabayaaqadii MV ee, Claudio Castiglioni, kuwaas oo u wakiishay sportbike saddex-dhululubo ka hor inta xagaagii lasoo dhaafay ka gudbaynaa kansarka iska. Tixgelineyso taariikh qoto dheer xidid ee tartanka wadada, mishiinka waxaa loogu talagalay tartan iyo baahidii of World SuperSport - taxane ah oo caalami ah tartanka in MV ayaa qorshaynaysa in ay tartamaan sidii hore xilli sida soo socota. In ka badan 20 million Euros waxaa funneled galay mashruuca la design oo dhan sameeyo guriga xarunta MV ee waqooyiga Italy. muhimka ah ee F3 waa dareere-qaboojiyey, Wabka engine saddex-dhululubo madaxa 12-waalka ah (dhammaan khaanadaha yihiin been abuur ka titanium) miiqeen by camshafts silsilad-driven mataanaha. dhululubo kasta isticmaalaa aragti dhaleen iyo stroke xad ka badan-square ah 79.0 x 45.9mm, Tuujiya lacag shidaalka in cabirku yahay 13:1. engine ee hoose-dhamaadka u shaqeeya design gaar ah, taas oo crankshaft ka gadaal dhigeeysa. Tani waxay ka caawisaa takhalusi tiiro hore ee mootooyinka ah ee mooshinka taasoo ku sii maneuverable xawaare sare engine, MV ayaa sheegay in. Like waxyaalaha ugu Talyaani, foomka soo socota shaqada ...
All qoruhu tusaha
Chief Indian (83)
oo xiiso leh (900)
xeebta galbeed (6)
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on lagu arkay: Moto Guzzi Norway Miss Baaskiilka
lagu arkay: Moto Guzzi Norge The Moto Guzzi Norge ayaa ubucda ah oo aan wacyiga baaskiilada socdaalka markii qaar ka mid ah. Mid ka mid ah lagu daydo oo dheeraad ah duwanyihiin suuqa, waxa ay sidoo kale dhacdo ...
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on Baaskiilado dhabayseen
Baaskiilado dhabayseen Taariikhda A kooban Marque ah: dhabayseen Walaalaha Collier dhisay ay mashiinka ugu horeysay ee 1899, iyo by 1907 ayaa ku guuleystay ee Isle of Man TT jinsiyadaha. Ka dib markii ...
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on Moto Morini Kanguro iyo Dart – Classic Baaskiilka Roadtest – RealClassic.co.uk
Moto Morini Kanguro iyo Dart Dadka intooda badan u muuqdaan in laysugu mid ka mid ah lagu daydo Morini Sport ama Strada si fiican u yaqaan. Laakiin at darafyadiisa ka soo horjeeda ee heerka aad ka heli doontaa ka super-cayishay ...
Just weblog kale WordPress.com 2004 Big Dog Ridgeback Fonzie ayaa sheegay in: Waxaan helay Ridgeback uu ku noqon karo xiiso leh, guuxa iyo dhabarta Jidhidhico - ka dibna mar kale, in kaliya laga yaabaa in aan spinal ...
2013 MV Agusta F3 First Ride – Euro jeedidda o ...
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on 2013 MV Agusta F3 First Ride – Euro jeedidda ee Tampa Bay
2013 MV Agusta F3 First Ride In wejiga ah u dhacooda iibka sportbike caalamka, Olimpico brand mooto Talyaani MV Agusta ayaa ujeedkiisu yahay inuu dib u soo nooleeyo SuperSport ee dhexe fadhiya ...
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on Moto Daymaynta guridda Baaskiilado
'66 Sears Gilera 106 The Moto-Daymaynta California waa dhowr bilood markiiba, laakiin tani waa markii ugu fiican si ay u bilaabaan qorshaynta oo waxaan haystaa meel fiican si ay u bilaabaan. A 1966 Gilera 106. Waxaa haboon ...
Blata motos mini Blata – baaskiilada cajiib ah xiddigaha ka gaysashada. Iyada oo ku xidhan nooca mini motos blata aad leedahay, matoorada kala duwan ilaa 13HP iyo aad dedejin kartaa weheliyaan at 50mph ...
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on Bajaj dib u eegis 220cc aardoonka
content Report Bajaj dib u eegis 220cc aardoonka bandhigid Transcript Bajaj aardoonka 220cc Review Waxaan kuu keenay news la xaqiijiyey in olole caalami ah oo aardoonka 220 15-June iyo ...
1969 BSA 441 Victor Gaarka ah – Classic Britis ...
20.06.2015. Author: DIMA. Comments Off on 1969 BSA 441 Victor Gaarka ah – Baaskiilado British Classic – Classics Baaskiilka
Content Related Barry Porter ee Benelli SEI 750 Barry Porter ka hadlaysaa lahaanshaha iyo fuushan uu Benelli SEI 750. Helay on Arbacada ah: 1963 BSA qaylo Waxayna warwareegi jireen bannaanka ka dhex ...
1991 BMW 850 V12 6 Speed 1991 BMW 850 6 Speed. 28K miles, taariikhda milkiilaha ururiyaha tan cusub. Loo yaqaan by badan oo ka mid ah tusaalayaal nool of an ugu fiican 8 taxane, baabuurta this ayaa ...
20 Jun 2015 | Comments Off on 2009 Honda CB1000R Road Test Review- Reviews Honda CB1000R Baaskiilka
2009 Honda CB1000R - Imtixaanka Road Fun Reebay: Honda ugu fiican ma waxaad ka iibsan kartaa! Jeesada in Honda dhismaha helicopter fiican u shaqeeya. credit Major for sidoo kale naga siiyo mooto / qalabka gaadiidka ah auto-trans-qalabaysan mooto-sida in ay tahay in la mid ka mid ah size-full laba-wheelers sahlan-to-door abid. laakiin, daacad ah, Honda, maxaad u haysta oo inagu soo? niinasaa salaamay CB1000R ku dul ay sal-dhigida ee Yurub sanadkii la soo dhaafay. Dhab ahaan, this baaskiil qaawan CBR1000RR ku salaysan dhameysatay kaalinta labaad ee 2008 ee ...
20 Jun 2015 | Comments Off on Honda rc166 lix dhululubo baaskiil ka 1960
Honda rc166 lix dhululubo baaskiil ka 1960 Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan RC166 Honda ah 250/6. Grand Prix tartanka maray kacaan ee 1960 hore. Honda ayaa lix dhululubo si deg deg ah isugu yimid. Si aad u hubiso soo baxay sanqadhii Honda RC166 Lix dhululubada ah booqo link hoos ku kumbyuutarradeedu lagu daray. Taasi waa mid ka mid baaskiil sanqadha macaan. Waxaan maqlay mid on sano Dhexe-Ohio ka hor. Waxaa soo diray. Sida of NR si Le Mans daray baaskiilada Production. Honda fuulnay lix-dhululubo DOHC ku powerplant dhab ah ay. Honda dhex orday ...
Honda CBR 600RR 2009 C-ABS Top Speed ​​280km / h Sida loo sameeyo & Ma Eve ...
20 Jun 2015 | Comments Off on Honda CBR 600RR 2009 C-ABS Top Speed ​​280km / h Sida loo sameeyo & Ma Wax walba!
Maxaad u malaynaysaa ku saabsan this video? Zsotyesz87: na ka baxo a comment:D izaky2011: sida baaskiil aabbahay! Jhon Camille Vergel: Waalidiinta ee ka mid ah saaxiib QE? waxaan sertgent: sidaas r6 guuleystay bediang80: aad doonayaa afuufaan aad engine ama waxa?? Fr3shChriS13: ok i qabaa ima heli r6 yamaha a. 2006 bilowga ah VIN steel: xukun jecel Quduuska ah waxaan doonayaa baaskiil si xun, taas oo ka dhigaysa aan baabuur u eg taangi. Leo motte: jawaan mano aad sida qaban bahal in si 280 jidka!!Waxaan riyadaydii pbmax: Bike codadka la yaab leh. John cajiinka: bullshat ...
20 Jun 2015 | Comments Off on 2005 Honda Silverwing Details eHow
2005 Honda Silverwing Details Trims The 2005 Honda Silver Wing waa mooto socdaalka laba-rakaab ah oo ku imanaya laba trims, Silver Wing model salka iyo ABS Silver Wing. model ee saldhiga ah waa la heli karo in midabada madow iyo titanium halka model ABS waxaa laga heli karaa in midabada duotone ee madow / lacag iyo titanium / lacag. guddi instrumentation waxay bixisaa muuqaalada aasaasiga ah sida odometer safarka, heerka shidaalka digniin iyo saacad a. Faraqa kaliya ee weyn ee u dhexeeya labada tusaale ee waa in model ABS waxay bixisaa ah ...
20 Jun 2015 | Comments Off on waxkhti Honda – Video Encyclopedia
waxkhti Honda taariikhda [ edit ] In 1995 kooxda galay a 3 fuushanba line la Mick Doohan. Alex Crivillé iyo Shinichi Itoh fuushan NSR500 Honda ah. Mick Doohan ku guuleystay koobka adduunka markii labaad oo isku xigta ee Argentina. iyadoo mid ka mid ah tartanka ka tagay dhamaadkii xilli ciyaareedkii la toddoba guul tartanka, Alex Crivillé ku dhameysatay xilli ciyaareedkii afaraad oo la 1 badiyeen tartanka halka Shinichi Itoh shanaad dhammeeyey guud. Afarta fuushanba line-up ku sii 1997 iyadoo Michael Doohan. Alex Crivillé iyo Tadayuki Okada ...
19 Jun 2015 | Comments Off on Day6 Rakaabka Bike dib u eegis riyo
Day6 Dream Review Turos Front / Rear Kenda Komfort 26 x 1.95 Rim derbiga Double, CNC sidewall, Daawaha Casette Shimano Derailleur Front / Rear Shimano Altus 21 xawaaraha Shifter Sram MRX Comp + Freewheel Shimano Maalinta Back 6 Duritaanka Custom doorsoon - la lumbar oo isku dhafan pack safarka miisaanka Time 35 34 Wheel Base 51 " Culayska Xad 250 pounds Fuushanba 5'4 Size "- 6'3" Time Fuushanba 4'8 Size "- 5'7" Time Colors Cobalt Blue, macdan Burgundy In cimrigaygu badan oo ...
19 Jun 2015 | Comments Off on Honda bishaaree a New 250cc V-Twin Bike, VTR The
Honda bishaaree a New 250cc V-Twin Bike, VTR The Honda ayaa sii daayay tafaasiisha qaar ka mid ah ay 250cc v-mataanaha baaskiil heer-galo cusub, VTR ah, taas oo u muuqataa sidii saddex warqado aan maqlay waqti badan ka hor. wareer? Waxaad ugu dhaqsaha badan illoobi doonaa wareer marka aad ka akhrisan war-saxaafadeed ee hoos ku. Waxaan helay iyadoo ay adag tahay in caloosha nafteena, la statements sida Qaybaha ganaax tayada ugu simi soo baxay waddooyinka socoto oo waxaad ka samaysaa VTR cusub raaxo u-maalinta oo dhan ka fuushaan. , inkastoo inkastoo in, ma aan samayn ...
Ben ee Electric Baaskiilka (B.E.M) update 8/12 Rode baaskiil in ay ka shaqeeyaan ayaa maanta inkastoo arrimaha pack batari. Waxaan soo iibsaday a pack 72V LifePo ka xal xoog Elite. Waxaa la iman dareemayaal for unug kasta oo computer ah in bandhigayaa sharikadaha, danab, awoodda. Waxa ay ahayd in casriyayn weyn. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan u lahaa in la sameeyo guryaha batari cusub ka xoq oo aniga ma ahi alxanka ugu fiican si ay waqti dheer qaatay. Markaas ka dib waxaan helay in sameeyey iyo wax kasta oo khali kor. Waxaan ku afuufay computer saxda ah ee ...
19 Jun 2015 | Comments Off on Honda CBR 150R 2012 Baaskiilada Ride First baaskiilada 135cc-165cc Autocar Hindiya
dib u eegis Honda CBR 150R, imtixaanka kortaan tag The "CBR" khasab ma aha tusinayaan ah baaskiil sports baxay-iyo-baxay. Sidaas daraaddeed, waxa qof sameeya ilmaha CBR ah, ee isboortiga CBR 150R? Sida aan arkay iyadoo Honda ayaa CBR 250R, ah "CBR” magaca tag khasab ma aha tusinayaan ah baaskiil sports baxay-iyo-baxay. Sidaas daraaddeed, waxa qof sameeya ilmaha CBR ah, ee isboortiga CBR 150R? A kortaan ugu horeysay degdeg ah na siiyey fikrad cadaalad ah. Xitaa ka dib markii indho taag dheer oo adag 150R CBR ah, waxa ay u muuqataa sida Gadzhiyev oo ka mid ah 250. laambad Y-qaabeeya The, ...
2006 Honda VFR800 interceptor – #x0024;7650 (North Denver) Waxaan uu ku dhow oo u dhaw in ay baxayaan. waqti kaamil ah inay ku tuuraan lugta ah ka gaartay mooto cusub! VFR A noqon lahaa doorasho fiicnayn for sort this ee wax. iyo sida kaliya dhacdo, Waxaan heystaa hal for sale! Sidaas, beddelkeeda lacagta caddaanka adag ku kasbatay waxaan idin siin doonaa mooto in uu leeyahay beddelka dhowr macno samayn, iyo sidoo kale isagoo lagu kalsoonaan karo sida dhagaxa weyn celceliska. Tani waa labaad jiilka 6-dii VFR aan loo leeyahay, ...
2WD BAASKIILKA ARARTA Laba mooto drive wheel asal ahaan loo kala qeybin kartaa ilaa laba kooxood ballaadhan; kuwa la drive farsamo oo macneheedu yahay silsilado ama fallaadhihii, iyo kuwa la isticmaalayo Haydarooliga ...
More ka qaybtan
S4 Fogarty cusub, sida runta ah classic ah dagdag ah, waa baad ah in mustaqbalkiisa ciyaareed cajiib ah kooxda heysata horyaalka afarta jeer WSBK a. baaskiil A keli ah ee dunida ugu garashada. State-of-the-art ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 Price in aan ...
Kawasaki Ninja 650R 2012 Price ee India – caddaymaha Bajaj Auto ayaa soo bandhigay oo dhan oo cusub 2012 edition ah superbike Kawasaki Ninja 650R toddobaadkii la soo dhaafay. Maxaa yeelay, boqorku macluumaadka ...
Suzuki AN 650 Bike Kawasaki ER-6n Moto Guzzi 1000 Daytona duritaanka Honda DN-01 Automatic Sports Cruiser Fikradaha eScooter smart MV Agusta 1100 Grand Prix Bajaj Baro mootooyinka Honda Dream Kids Dokitto Indian Chief Classic Harley Davidson-Janumet 1200 Fikradda Aprilia Mana 850 Ducati Diavel Bike Kawasaki Square Afar Honda Goldwing noocooda M1 Suzuki B-King Final string KTM 125 Fikradaha Race Honda DN-01 Royal Enfield rasaas 500 classic Brammo Enertia Suzuki B King Fikradaha Suzuki Colleda CO In mooto Honda Ducati Desmosedici GP11 Honda X4 Low Down Ducati 60